Marketing ny tenanao: Ahoana no fanoratana boky
Ahoana ary maninona no manoratra boky
Alahady, Jolay 4, 2010 Alakamisy Oktobra Oktobra 27, 2011 Robby Slaughter
Vao nahavita boky aho, Tsy fahombiazana: Ny tsiambaratelon'ny fahombiazana. Rehefa maheno an'io ny olona dia manolotra arahaba arahaba ary manontany ahy fanontaniana roa momba ny stock:
Taiza no nahazoanao io hevitra io?
Naharitra hafiriana ny fanoratana?
Inona no nanosika anao hanoratra boky?
Azoko atao ny mamaly ny iray amin'ireto fanontaniana ireto ho anao, saingy lazaiko aminao ny marina fa mitovy daholo ny fanontaniany rehetra: Ahoana no fanoratanao boky? Ho an'ny olona maro, ny fiheverana ny fananganana bilaogy tokana dia toa asa mafy. Boky feno dia toa tsy azo atao mihitsy. Ary na dia mety bilaogy natokana ho an'ny teknolojia marketing aza izy io, ny teknolojia ranomainty amin'ny ranomainty amin'ny taratasy dia marketing lehibe. Anontanio fotsiny ny mpanoratra ny Fitorahana bilaogy ho an'ny Dummies.
Ity ny fomba fanaovanao azy.
Dingana 1: manapa-kevitra ny amin'ny antony
Ny fanontaniana voalohany sy manandanja indrindra momba ny fanoratana boky dia ny famaliana ny fanontaniana “Fa maninona aho no te hanoratra boky?” Mety ho zava-poana izany. Mety satria tsy misy ilay boky tianao vakiana (na farafaharatsiny tsy hitanao.) Mety hanampy anao amin'ny fametrahana ny tenanao ho mpitarika eritreritra ao anaty akany io. Na, mety ho noho ianao te hanao zavatra sarotra sy tsy fahita firy.
Na inona na inona antonyo dia tsy maintsy ataonao eo anoloana sy eo afovoany ny "maninona" mandritra ny dingan'ny famoronana ny bokinao. Raha tsy hitanao ny tanjon'ny bokinao dia tsy hiasa intsony ianao. Na ratsy kokoa, ny bokinao dia hirenireny amin'ny zavatra hafa.
(Fanamarihana: tsy maninona ny mahita ny tanjonao rehefa mandeha ianao ary manova ny antony hoe "maninona", fa ataovy izany amin'ny fahatsiarovan-tena! Rehefa dinihina tokoa, raha manova ny anton'ny fanoratana ianao nefa tsy tsapanao akory dia ho voatery hanova ny antsasaky ny mpamaky anao ilay boky! Mety tsy izany no tadiavin'ny olona.)
Dingana 2: Mamolavola drafitra fanoratana
Ny karazana karazana boky dia mitaky dingana samihafa amin'ny fizotry ny fanoratana. Ho an'ny bokiko, ny fizotrany dia misy mamolavola trano, mamoaka drafitra, tantara mikaroka ary farany soratra ary fanovana. Raha milaza memoir ianao dia mety manana drafitra hafa. Na raha miara-miasa amin'ny mpanonta ianao ao anatin'ny andiany iray (toy ny bokin'i Doug sy Chantelle momba ny fitorahana bilaogy orinasa ho an'ny “Dummies"), Mety hanome anao ny sasany amin'ity rafitra ity izy ireo.
Ampahany lehibe amin'ny drafitra fanoratanao ny manokana fotoana hiasana amin'ny bokinao. Mandehana any amin'ny kalandrianao ary sakano ny "ora fanoratana." Tombana tsara dia Teny 150 isan'ora. Ka raha mieritreritra ianao fa mety manoratra boky teny 30,000 dia tokony ho 200 ora izany. Mandehana any amin'ny kalandrianao ary sakano mandritra ny 200 ora ny “fanoratana boky.” Raha mifikitra amin'ny fandaharam-potoananao ianao, dia handroso bebe kokoa noho ny noeritreretinao azy.
Dingana 3: Fidio ny fitaovanao
Betsaka ny adihevitra momba ny fomba fanoratana tsara indrindra, fa holazaiko aminao izao: arakaraka ny ahafahanao mifantoka dia vao mainka ianao manoratra. Mpankafy aho Google Docs amin'ny mpandika teny nentim-paharazana, satria manafaka anao tsy hiasa saina amin'ny fandrafetana izany ary azo idirana na aiza na aiza. Afaka miditra amin'ny fotoana iray aza ianao sy ny mpampanonta anao!
Afaka mandeha zen miaraka amina rindrambaiko toy ny Mpanoratra mpanoratra na lamaody taloha fotsiny Kahie moleskine. Na inona na inona safidinao, dia ataovy amin'ny fikasana.
Dingana 4: Mifikitra amin'ny drafitrao
Tsy dia toa dingana kely akory io, fa eo no misy olana amin'ny ankamaroan'ny mpanoratra boky. Sahirana amin'ny tetikasa hafa ianao, ary manelingelina ny bokinao ny fiainana. Raha vita daholo ireo boky nilaozana eto amin'izao tontolo izao dia mety hanana boky an'arivony heny amin'ny talantalana isika. Mifantoha! Tsarovy ny "antony." Omeo voninahitra ny drafi-panoratanao.
Fomba tsara hitazomana ny tenanao ho mazoto dia lazao amin'ny olona atokisanao manoratra boky ianao. Angataho izy ireo manontany anao momba izany! Hanampy anao hijanona eo amin'ny lala-mahitsy izany.
Dingana 5: Mamoaha sy mampiroborobo
Ho ahy, ny ampahany sarotra indrindra amin'ny fanoratana boky dia ny fivarotana azy. Tsy ahy ny marketing sy ny fampiroboroboana. Mila miezaka aho mba hanontany ny olona hividy kopia. (Izay heveriko fa ataoko izao. Jereo kely!)
Fa anio, afaka mampiasa teknolojia hivarotana boky taratasy efa taloha ianao. Manangana bilaogy boky. Mampiroborobo ny boky ao amin'ny Twitter ary miaraka a Facebook Page. Mangataha dinidinika amin'ireo olona izay mitantana bilaogy, programa amin'ny radio amin'ny Internet na loharanom-baovao hafa. Manomeza tanana ary ataovy izay hahombiazan'ny asanao!
Robby Slaughter dia manam-pahaizana momba ny asa sy ny famokarana. Ny fifantohany dia ny fanampiana ireo fikambanana sy olona tsirairay ho lasa mahomby kokoa, mahomby kokoa ary afa-po kokoa amin'ny asa. Robby dia mpandray anjara mavitrika amin'ny magazine isam-paritra maro ary efa nitafatafa tamin'ny famoahana nasionaly toa ny Wall Street Journal. Ny bokiny farany dia Ny Recipe tsy resy ho an'ny hetsika Networking.. Robby mihazakazaka a consulting fanatsarana ny orinasa orinasa.
Marketing Conductors… diso .. Mpanolo-tsaina
Fanontaniana dimy momba ny paikady fanatsarana ny atiny
27 Okt 2011 amin'ny 10:55 PM
Rehefa nanoratra ny bokiko voalohany (ary manantena ny hanoratra bebe kokoa aho), misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny fomba fijerin'ny olona anao ho toy ny mpanoratra. Tsy dia hendry noho ny talohan'ny nanoratako ilay boky aho, ka gaga aho indraindray rehefa mahita ny valiny. Na izany aza, raisiko izay azoko!